Xawaaraha bogga waxaa lagu qeexay dhamaan waxyaaba ku jira bog gaar ah ee qaadanayo browser-ka si aad u hesho barta hore ee server-ka. In kastoo ay lamid tahay xawaaraha bogga ma aha mid la mid ah xawaaraha goobta. Xawaaraha goobta ayaa ah dhowr tusaale ee celceiska bogaagga.
Maxaad u door bidi la heeyd xawaaraha Bogga
wuxuu muhiim uyahay isticmaalaha bogga waana page xaawaare ku socda isticmaalkiisuna fiicanyahay hadii uu qaato 3 second kabadan si uu wax u raadiyo waxaa ka bixi doona afarmeelood meel isticmaalayaasha. Isticmaalayaasha mobileka waxeey raadiyaan speed. Isla qiimeeyntaan 73% isticmaalayaasha ayaa soo gudbiyay websiteyada eey booqdeen in xawaarahoodu uu hooseeyo tusaale walmart.com waxeey hoosta ka xariiqeen secondkasta in uu sare u kacaayay xawaaraha pageka waxeeyna arkeen 2% in uu sare u kacaayay.
Cilaaqaadka hoos u dhigaya bogga
haddii aadan falanqeynin xawaaraha bogga Ma ogaan kartid sida ay isticmaalayaashu u dhexgalaan website-kaaga’Google Page Insights’ ayaa kuu ogolaanaya inaad aragto dhibcaha xawaaraha boggaaga marka lagu daro sababaha – kor ku xusan ayaa ku siinayo in boggaagu uusan ku dhajin karin sida ugu dhakhsiyaha badan.
google-ka gaaban ee xawaaraha
Si kastaba ha ahaatee, celcelisyada ay bixiyeen qalabkaan Google ma aha had iyo jeer sawir buuxa. Fiiro deg-deg ah oo ku jirta qalabka Page Speed ​​Sequoity waxay bixisaa fikrado faa’iido leh marka aad sameyso isbeddelada muujinaysa aragtida Google ee muuqaalka Page Speed. Waxaad sameyn kartaa kahor iyo kadib falanqaynta sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato haddii taasi keentay in kororka gaadiidka iyo is-beddelka goobtaada.
Qalabka xawaarida xawaaraha boggagu
Sida Google qorsheyneyso in ay ku abaal mariso boggaga internetka ee moobiilka. xawaaridda xawaaraha boggaagu waa lagama maarmaan mustaqbalka, Sida aan rajeyneyno, inkasto, hal shay u cad yahay: diiradaada SEO waa inay ahaato hagaajinta xawaarahaaga boggaaga